FBS၏ ဘန်ကောက် ထရိတ်ဒါများတွေ့ဆုံပွဲမှ အမှတ်တရများ
FBS ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပွဲကျင်းပခဲ့ရတဲ့အတွက် အရမ်းပဲဝမ်းမြောက်မိပါတယ်. ထိုပွဲတွေက အရမ်းကိုတက်ကြွလန်းဆန်းပြီး လှပဆန်းသစ်လွန်းခဲ့ပါတယ်. နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ FBS၏ ဘန်ကောက် ထရိတ်ဒါများတွေ့ဆုံပွဲကတော့ စောနကပြောတာနဲ့ တထပ်တည်းပါပဲ.
ပွဲမှာ ချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့ ထရိတ်ဒါတွေ၊ Baitoey R-Siam၊ Pexky Sretunya နဲ့အတူ9Apple gadget နဲ့ Yamaha NMAX 155 တွေကို ဆုမဲဖောက်တာတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်. ဧည့်သည်များဟာ မျက်လှည့်ပြပွဲ၊ ပုံတူ ဟာသပန်းချီဆွဲဖို့ ပိုစ်ပေးခြင်းတွေနဲ့ ထရိတ်ဒါကြီးတွေ၊ ပါတနာတွေ၊ FBS ရုံးကသူတွေနှင့်အတူ စကားလက်ဆုံကျခဲ့ ကြတာကို အရမ်းကိုနှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြပါတယ်.
FBSစီအီးအိုမှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်. ထိုတွေ့ဆုံပွဲအတွင်း ထရိတ်ဒါများနှင့် အတူတကွတွေ့ဆုံပြီး အမှတ်တရအချိန်ကောင်းလေးများကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့်အတွက် အလွန်တရာမှ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါသည်.
ဧည့်သည်များဟာ Instagram ပုံအလန်းစားတွေကို FBS selfie ရိုက်တဲ့နေရာမှာ ရိုက်ခဲ့ကြပြီး celebrities တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးမှသူတွေနဲ့လည်း ဓာတ်ပုံအတူတူ ရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်. ခပ်တိုတိုလေးချုပ်ပြောရရင် ညနေပိုင်းမှာဆိုရင် အမှတ်တရဖြစ်စရာတွေ ပြည့်နှက်နေပါတယ်. တက်ရောက်သူတွေအားလုံး ဒီပွဲလေးကို အမှတ်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.
စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ - ယခုကဲ့သို့ ထူးကဲသည့်တွေ့ဆုံပွဲများ လာပါဦးမည်!
DST ကြောင့် အရောင်းအဝယ် အချိန်ဇယား အပြောင်းအလဲများ!
အောက်တိုဘာ ၂၈မှစပြီး၊ ဥရောပနှင့် အမေရိကသည် နေ့တာအချိန်များ (စံတော်ချိန်)သို့ ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်သောကြောင့် အရောင်းအဝယ် အချိန်ဇယားမှာ အပြောင်းအလဲများစွာ ရှိပါလိမ့်မည်
bitcoin ethereum သဘော အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း litecoin dash ပထဝီဝင် နိုင်ငံရေးပညာ နယူးယောက်မြို့ရှိ ငွေကြေးလုပ်ငန်းဗဟိုဈေးကွက် ထုတ်လုပ်သည် လူသုံးကုန် စီးပွားရေး ရောင်းဝယ်သူ၏ ဝေါဟာရ brl လူတွေ့မေးမြန်း ဘလော့ချိန်း လူနေမှုဘဝ gold chf aud bitcoin forex exchange forex ပညာပေးသင်ကြားရေး ဥရောပ ဗဟိုဘဏ် အစည်းအဝေး သြစတြေးလျ အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ mxn (မက္ကဆီကို ယွမ်) eur ကုနျသှယျရေး bitcoin အနုပညာရှငျကုနျသညျမြား nzd jpy အထိ ငွေရေးကြေးရေး ဇာတာခွင်ဟောကိန်း တရုတ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် အရောင်းအဝယ် စစ်ပွဲများ စက်မှုလုပ်ငန်း လက်လီရောင်းချသူများ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု zar (တောင်အာဖရိက ရန်) forex factory cad အပျော် ပညာရေး ဖြစ်ထွန်းမှု dow jones usd အာရှ နည်းပညာ(ta) သုံးသပ်ချက် trend အရောင်းအဝယ် ရောင်းဝယ်သူတိုင်း သိထားသင့်သည် သတင်းများနှင့် ရောင်းဝယ်ခြင်း forex signals try လှုံ့ဆော်မှု ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး forex ကုနျသှယျ gbp အတိုးနှုန်း အမြတ် ဂျာမနီ ထိုင်ဝမ် စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက် ဈေးနှုန်းများ လူသစ်များ အရောင်းအ၀ယ် ကျွမ်းကျင်မှုများ အောင်မြင်မှု ငွေကြေးများ cnh show all